संघ – Page 685 – Halkaro
नवलपरासीका क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन
प्रकाशित मिति : २०७३, १८ माघ मंगलवार
नवलपरासी । नदीजन्य पदार्थको स्रोत नखुलाएको भन्दै जिल्ला विकास समिति नवलपरासीले जिल्लाका सबै क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । जिल्लास्तरीय अनुगमन समन्वय समितिको निर्णयअनुसार जिविसले क्रसर उद्योगमा रहेका नदीजन्य पदार्थको स्रोत खुलाउन माघ १७ सम्मको म्याद दिएको थियो । सो समयभित्र व्यवसायीले स्रोत नखुलाएपछि मंगलबार देखि पूर्ण रुपमा उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिइएको […]
गैँडाकोटमा खाद्य मेला लाग्ने
चितवन । गैडाकोटमा माघ २१ गतेदेखि दुईदिने खाद्य मेला हुने भएको छ । मेलाको तयारी तीब्र भइरहेको आयोजक क्षेत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ । प्रदर्शनी स्थल नारायणी नदी किनारमा आयोजना हुन लागेको मेलामा स्थानीय घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनका लागि ६० भन्दाबढी स्टल रहने मंगलवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी […]
राजदुत नियुक्ति गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले विभिन्न मुलकमा रिक्त राजदुत तत्कालि नियुक्त गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मंगलबार संसद सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकले परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई तत्काल राजदुत नियुक्त गर्न निर्देशन दिएको हो । समितिको बैठकमा राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ र अवैतनिक राजदूतको कार्यप्रगतिका सम्बन्धमा परराष्ट्रमन्त्री डा प्रकाशशरण महतसँग छलफलपछि […]
कहाँ सुतेका थिए वार्इसीएल ? प्रचण्डको निर्देशन अायो व्यूझन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वार्इसिएललार्इ देशमा दक्षिणपन्थी हावा चलेको भन्दै निद्राबाट ब्यूँझन निर्देशन दिएका छन् । उनले केही दलले एकै पटक केन्द्रको चुनाव गरेर संघीयता र समावेशीता उल्टाउन चाहेको आरोप लागउँदै वार्इसीएललार्इ खबरदारी गर्न निर्देशन दिए । सोमबार राजधानीमा वाईसीएलको एकता भेलालाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, देशमा अहिले […]
लोथरका ५ वडामा सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिती गठन
चितवन । चितवनको लोथर गाविसका ५ वटा वडामा वडास्तरीय सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । आरआरएन जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण परियोजनाको सक्रियतामा गाविसका १, २, ३, ४ र ९ नम्बर वडामा छुट्टाछुट्टै भेला बसी समिती गठन गरिएको हो । स्थानीय विपद् तथा जलवायुजन्य जोखिम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०७३ अनुसार गाविस बढी जोखिममा रहेका […]
संवादहिताको अन्त्य गर्दै सार्क देशका सहसचिवहरु काठमाडौँमा भेला हुँदै
प्रकाशित मिति : २०७३, १८ माघ मंगलवार January 31, 2017
काठमाडौँ । १० महिना लामो संवादहिनताको अन्त्य गर्दै सार्क सदस्य राष्ट्रहरुका सहसचिवहरु काठमाडौँमा भेला हुने भएका छन् । चालु संवादहिनताको अन्त्य गर्दै माघ १९–२० गते काठमाडौँमा सार्कको प्रोगामिङ कमिटिको बैठक बस्न लागेको हो । पाकिस्तानमा हुने भनिएको १९ औँ सार्क सिखर सम्मलन स्थगित भएको तीन महिना पछि पहिलो पटक सार्क देशहरुका सहसचिव स्तरीय बैठक काठमाडौँमा […]
राजदुत नियुक्तिमा ढिलाइ प्रति संसदीय समितिको चासो
काठमाडौँ । राजदुत नियुक्तिमा ढिलाइ विषयमा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले आज मंगलबार समितिको बैठक बोलाएको छ । राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा १३ देशका लागि राजदुत नियुक्ति हुन सकेको छैन् । समितिको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवलगायतलाई बोलाइएको छ । राजदुत नियुक्ति नहुँदा नेपालको कुटनीति क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला संसदको समिति बैठक […]
अाप्रवासीमाथि प्रतिवन्ध लगाउने ट्रम्पको निर्णयको बचाउन नगर्ने महान्यायाधिवक्ता बर्खास्त
काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको आलोचना गर्ने महान्यायाधिवक्ता स्याली येट्स बर्खास्त भएकी छन् । उनले न्यायिक विभागले आप्रवासीसम्वन्धी ट्रम्पको कार्यकारी आदेशको बचाउ नगर्ने बताएकी थिइन् । हृवाइट हाउसले येट्समाथि धोका दिएको आरोप लगाउँदै बर्खास्त गरेको हो । उनी बाराक अोबामा प्रशासनले नियुक्त गरेकी महान्यायाधिवक्ता हुन् । उनले आप्रवासीसम्वन्धी राष्ट्रपतिको आदेश नियमसंगत भएको […]
कपिलवस्तु । जिल्लाको शिवराज नगरपालिका १२ कटुवामा इनारमा डुबेर एक बालकको ज्यान गएको छ । कटुवाका बजरंगी चौधरीका ५ वर्षीय छोरा अर्देश चौधरीको इनारमा डुवेर मृत्यु भएको हो । सोमबार साँझ करिब ६ बजे खेल्ने क्रममा इनारमा खसेर उनको मृत्यु भएको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले जनाएको छ । बालकको शवलाई पोष्टमार्टम गर्नका लागि शिवराज अस्पताल […]
सुपुर्दकी सन्धी गर्न प्रहरीको दबाब
काठमाडौँ । प्रहरी र सरकारी वकिलले अपराध नियन्त्रणका लागि सुपुर्दगी र पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि नहुँदा अन्तर्देशीय अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । विदेशमा लुकेका अपराधीहरूलाई नेपाल ल्याउन सो सन्धि आवश्यक भएको उनीहरूको ठहर छ । उनीहरूले अपराधीको क्षेत्रीय, राष्ट्रिय, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल खडा गर्ने कार्य भइरहेको अवस्थामा देशबाहिर रहेका […]